Cusbitaalka Deyniile oo helay qalabka dhaliya korontada cadceeda ku shaqeysa – Kalfadhi
Cusbitaalka Deyniile oo helay qalabka dhaliya korontada cadceeda ku shaqeysa
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Yariisow) iyo safiirka dowladda Norway u fadhiya Soomaaliya Vebron Heines ayaa maanta xariga ka jaray korontada cadceeda ku shaqeysa oo laga hergilayay cusbitaalka Dayniile ee degmada Dayniile.
‘’ Aniga iyo Safiirka Norway ee Soomaaliya Vebron Heines ayaa maanta xariga jaray korontada cadceeda ee cusbitaalka Dayniile,’’ ayuu yiri guddoomiye Yariisow.
Cusbitaalka Dayniile ayaa bixiya adeeg caafimaad oo ay ka faa’ideystan hooyada iyo dhallaanka.
Hey’adda Unicef ee Qaramada Midoobay ayaa gacanta ku heysa cusbitaalka iyada oo bixisa daawooyinka iyo dayactirka uu u baahan yahay cusbitaalkan.
Shirka dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah oo galay maalintiisa labaad
Xildhibaan Lutfi Shariif oo noqday xoghayaha baarlamaanka Afrika